Bacda aan tolmo lahayn ee D-Cut
Ultimate Non-xidhkii kubbado
Bacda Cawiska Cudurka leh Gusset-ka hoose
Bacda Mesh Mesh Bag
Bacda Weelka Cadka Cawada Weelka Boorsada
Waa maxay saamaynta ay kiishashka aan-xidhka lahayn ee ilaalinta deegaanka ee alaabooyinka ganacsiga?
Waqtiga dhejinta: Apr-28-2021
Waa maxay saamaynta ay kiishashka aan-xidhka lahayn ee ilaalinta deegaanka ee alaabooyinka ganacsiga? Bacda aan xidhka lahayn ee ilaalinta deegaanka waa nooc ka mid ah baakadaha baakadaha oo ka samaysan dhar aan tolmo wanaagsan lahayn. Waa nooc ka mid ah faahfaahinta foomka dibedda iyo xoojinta sawirka guud ee badeecada. Waa nooc o ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo kala saaraa dhumucda bacda samaynta dharka aan dunta lahayn?
Sidee loo kala saaraa dhumucda bacda samaynta dharka aan dunta lahayn? Soosaarka dhar aan tolmo lahayn, mararka qaarkood dhumucda dharka aan tolmada lahayn waa mid aan sinnayn. Maxaa jira? Waxyaabaha soo socda ayaa loogu talagalay inaad ka hadasho sababaha suurtagalka ah ee dhumucda aan sinnayn ee dharka aan dharka lahayn ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxyaabaha lagu tixgelinayo xisaabinta qiimaha bacda aan tolmo wanaagsan lahayn
Waxyaabaha ay tahay in lagu tixgeliyo xisaabinta qiimaha ee bacda aan tolmo lahayn Maxay yihiin qodobbada ay tahay in lagu tixgeliyo xisaabinta qiimaha ee boorsooyinka aan xidhnayn? Hadda waxaa jira bacaha badan oo la qaabeeyey oo aan tolmo wanaagsan lahayn. Shirkado badan iyo dukaanno ayaa u baahan inay jaangooyaan bacaha aan dunta lahayn, si ay kor ugu qaadaan sumcadda wax soo saarkooda ...Akhri wax dheeraad ah »
Waxyaabaha saameeya qiimaha boorsooyinka aan la jeexjeexin
Waqtiga dhejinta: Apr-25-2021
Sababaha saameynaya qiimaha bacaha aan cufan lahayn Waqtiga abuurka Kadib: Nofeembar 02, 2011 13:36 faallooyin: 1 dhirtan: 165 tabarucaad Maanta Shiinaha, iyadoo sii xoogeysaneysa fikirka kaarboon-ka hooseeya, baahida loo qabo bacaha ilaalinta deegaanka ayaa sii kordheysa. Si loo qabsado saamiga suuqa, nin ...Akhri wax dheeraad ah »
Tirada boorsooyinka aan tolmo lahayn ayaa yar, taas oo kordhinaysa kharashka!
Waqtiga boostada: Apr-24-2021
Tirada boorsooyinka aan tolmo lahayn ayaa yar, taas oo kordhinaysa kharashka! Maalmahan, u-habeynta wax soo saarka waxay noqotay habka guud ee dhammaan qaybaha nolosha. Boorsooyin aan tolmo lahayn ayaa sidoo kale lagu daray. Si kastaba ha noqotee, dadka dalbanaya, habeynta ayaa leh faa'iidooyin iyo faa'iido daro labadaba. Maxaad sidaa u leedahay? Zhdbag, sida pr ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay sababta qiimaha unugga ee dufcado yaryar oo aan ahayn tolmo wanaagsan?
Waa maxay sababta qiimaha unugga ee dufcado yaryar oo aan ahayn tolmo wanaagsan? Macaamiil badan ayaa la yaaban markay ogaadaan in oraahdeenu ay aad uga badan tahay qiimaha cutubka ee 5000 kiish aan tolmoonayn markii aan dalbado 1000 kiish oo aan tolmo lahayn? Farqi weyn ayaa udhaxeeya qiimaha halbeega ee tobanaan kun oo jawaano ah, sidaa darteed waxaan u maleyneynaa ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo aqoonsadaa tayada dharka ee bacda ilaalinta maqaarka ee aan lahayn tolmo wanaagsan?
Waqtiga boostada: Abriil-22-2021
Sidee loo aqoonsadaa tayada dharka ee bacda ilaalinta maqaarka ee aan lahayn tolmo wanaagsan? Sidee loo aqoonsadaa dharka aan dharka lahayn? Ugu horreyntii, waxaan u baahannahay inaan ogaano in maaddada bacda aan tol-galoolan ay dabiici ahaan tahay mid aan-tolmo lahayn, sidoo kale loo yaqaan non-tolmo wanaagsan. Laakiin waxaan guud ahaan ugu yeeraynaa mid aan tolmo wanaagsan lahayn. Suuqa maanta aan dunta lahayn, ...Akhri wax dheeraad ah »
Waa maxay farqiga u dhexeeya bacda aan tolmoon iyo bacda warqadda?
Waa maxay farqiga u dhexeeya bacda aan tolmoon iyo bacda warqadda? Waxaan inta badan aragnaa laba nooc oo jawaano ah, midna waa dhar aan tolmo wanaagsan lahayn; Mid waa warqad. Dhar aan tolmo lahayn ayaa loo qaybin karaa baco aan tolmo lahayn, bacaha aan xidhnayn, bacaha wax lagu iibiyo ee aan lahayn tolida, iwm Waraaqda waxaa loo qaybin karaa bacaha kartoonka cad ee la qaadan karo, dharka ...Akhri wax dheeraad ah »
Kee baa ka wanaagsan kan bacda wax iibsanayaa ee aan tolmo lahayn iyo shandadda warqadda ku jirta?
Kee baa ka wanaagsan kan bacda wax iibsanayaa ee aan tolmo lahayn iyo shandadda warqadda ku jirta? 1 、 Dib-u-adeegsiga bacaha wax lagu iibiyo ee aan tolmo wanaagsan lahayn. Faa’iidada boorsada wax lagu iibiyo ee aan xidhka lahayn ayaa ah in marar badan dib loo isticmaali karo. Bacda warqadda ah waa la isticmaali karaa oo keliya, qiimaha warshadduna wuu ka sarreeyaa kan dukaamaysiga aan tolnimada lahayn ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo daabacaa ereyada boorsooyinka aan laqarin?
Sida loodaabaco ereyada jawaanada aan laqarin？ Hada macaamiil badan ayaa aaladeeya bacaha aan tolmada lahayn iyagoo daabacaya shirkadooda ama astaan ​​urur iyo qoraal. Astaanta waxaa lagu daabacan karaa bacaha aan tolmo lahayn iyadoo la adeegsanayo qaababkan soo socda: 1. Daabacaadda shaashadda xariirta ah Tani waa hab caadi ah oo wax loo daabaco, qiimaha waa mid dhexdhexaad ah, sidaa darteed m ...Akhri wax dheeraad ah »
Sidee loo hagaajiyaa nolosha boorsada aan la xidhin?
Waqtiga boostada: Abriil-18-2021
Sidee loo hagaajiyaa nolosha boorsada aan la xidhin? Maalmahan, bulshadan aan wasakhda lahayn, bacaha wax lagu iibiyo ee aan tolnayn ayaa caan ku ah halkii baco caag ah oo wasakheyn lahaa deegaanka. Si kastaba ha noqotee, bacaha noocan ah waxay asal ahaan ka duwan yihiin qaar ka mid ah bacaha wax lagu gado ee lagu iibiyo suuqa, Guud ahaan marka la hadlayo, haddii ...Akhri wax dheeraad ah »
Bacda aan tolmo-xidhka lahayn ayaa loo adeegsadaa tikniyoolajiyad noocee ah?
Bacda aan tolmo-xidhka lahayn ayaa loo adeegsadaa tikniyoolajiyad noocee ah? Bacda dharka aan tollayn ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu qabto funaanad kaashmer ah. Dhinac waa dhar aan tolmo lahayn, dhinaca kale waa PVC ama dhammaantood waa qalab dhar aan tolmo lahayn Waxa kale oo jira nooc ka mid ah boorsada dharka lagu qurxiyo ee cashmere, taas oo ah hidde ...Akhri wax dheeraad ah »